कोठाभित्रै बसिरहन‍े संक्रमितलाई भिटामिन ‘डि’ को कमी ! – Khabar PatrikaNp
काठमाडौं । भिटामिन ‘डि’ ले हाड र मांशपेशीलाई बलियो बनाउँछ । भिटामिन ‘डि’ ले क्याल्सियम र फोस्फोरसको सन्तुलन कायम राख्छ । यतिमात्र होइन, भिटामिन ‘डि’ ले ‘डि’ प्रेशनलाई पनि कम गराउने अध्ययनहरुले देखाएका छन् ।
भिटामिन ‘डि’ को कमीले रोगसँग लड्ने प्रतिरोधात्मक क्षमतामा पनि हस ल्याउँछ । यसको अर्थ भिटामिन ‘डि’ को कमीले मोटोपन, मधुमेह, मुटुरोगका समस्या पनि देखिन थालेको अध्ययनहरुले देखाएका छन् ।
भिटामिन ‘डि’ को मुख्य स्रोत सुर्यको किरण हो । सुर्यको किरणमा भएको अल्ट्रा भायोलेट किरणको सहयोगले हाम्रो छालाले भिटामिन ‘डि’ बनाउँछ, जुन प्राकृतिक रुपमा भिटामिन ‘डि’ प्राप्त हुन्छ । खानेकुराबाट पनि भिटामिन ‘डि’ पाइन्छ । माछा र अण्डाबाट पनि प्रर्याप्त मात्रामा भिटामिन ‘डि’ पाइन्छ ।
उत्तर पश्चिम देशहरुमा कोरोना संक्रमित र भिटामिन ‘डि’ को बारेमा एक अनुसन्धान गरिएको थियो । सो अनुसन्धानले संक्रमितहरुमा भिटामिन ‘डि’ कमी भएको पाइयो । साथै,भिटामिन ‘डि’ को कमी भएका संक्रमितलाई जटिलता आउने पनि देखियो ।
संक्रमितहरुमा भिटामिन ‘डि’ को कमी हुनुमा संक्रमण भएपछि घरबाहिर निस्कन नपाउने हुँदा घामको किरणको अभावले हो कि भन्ने अनुमान गरिएको छ । त्यसैले आइसोलेसन घाम छिर्ने खालको हुनुपर्दछ ।
कोरोनाबाट अति प्रभावित चीन, इरान, इटाली, दक्षिण कोरिया, स्पेन, स्वीजरल्याण्ड, बेलायत र अमेरिकामा सो अध्ययन गरिएको थियो । जोन हप्किन्स यूनिभर्सिटिका विज्ञहरु पनि भिटामिन ‘डि’ को समस्या नभएका संक्रमितमा थप जटिलता नआउनेमा सहमत छन् ।
Prevसाउदी अरबको नयाँ नोटमा आफ्नो नयाँ नक्सा राख्न भारतको माग
Nextअर्जुन विकको सत्य कथामा आधारित भिडियो सार्वजनिक हेर्नुहोस (भिडियो सहित)
प्रहरी कमाण्डमा महिलाहरु इञ्चार्ज पाउनबाट बञ्चित
आफ्नै बुवाको टाउको काटी प्रायश्चित गर्न बनाइएको बौद्ध स्तूपाको यस्तो छ…! रोचक कथा !
काठमाडौँ महानगरपालिकाका यी ठाउँहरु सिल गरियो, घर बाहिर ननिस्कन प्रशासनको आग्रह !! (28299)
कलिलो यु’वतीहरु राखेर यौ’न धन्दा : भिडियो हेर्नुहोस (25692)
भाग्यमानीको हातमा कति ओटा शंख वा चक्र हुन्छ…..? थाहा पाउनुहोस् (23486)
सोनी हाङ्मा लिम्बुको प्रेमी भनिएका डीकेन लिम्बु आए मिडियामा, गरे सबैलाई चकित पार्ने खुलासा…! भिडियो हेर्नुहोस (15921)
मुस्लिम अरबिक महिलालाई ग’र्लफ्रेन्ड बनाउदा काठमाण्डौमा महल बन्यो… (15322)